Taliban Oo 70% Ku Firfircoon Dalka Afghanistan [Akhri Warbixin Xasaasi Ah]. – Shabakadda Amiirnuur
Taliban Oo 70% Ku Firfircoon Dalka Afghanistan [Akhri Warbixin Xasaasi Ah].
February 5, 2018 9:29 am by admin Views: 148
DagaalyahannadaTaalibaan oo soo duulayaasha reer galbeedku ay ku khasaariyeen Balaayiin dollar si ay uga guuleystaan ayaa hadda 70% wadanka Afghanistan gacanta kusii dhigaya.
Cilmibaaris qaadatay bilooyin oo laga sameeyay wadanka oo dhan ayaa muujineysa in xoogagga Talibaan ay gacanta ku hayaan ama ay ka howlgalaan dhul aad uga badan midkii ay ciidamada shisheeye uga tageen sanaddii 2014.
Dowladda Afghanistan oo iska riixday(beenisay) cilmibaarista ayaa sheegtay in ey iyadu gacanta ku heyso dhulka badankiisa. Lakiin weeraradii ugu dambeeyay oo lagu dilay tirooyin ayay Talibaan ka fulisay magaalada caasimadda ah ee Kaabuul iyo meelo kale oo wadanka kamid ah waxayna xarakadu noqotay awood laga heybaysto oo aan la loodin karin.
Hoggaamiyaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo Donald Trump waxay ku jawaabeen in aysan wax wada hadal ah lagali doonin Taliban. Sanadkii lasoo dhaafay Trump wuxuu sheegay in kabixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan uusan aheyn mid xadidan.
Dhul intee la eg ayay Taalibaanku Xukumaan?
Cilmibaarista BBC waxaa lagu ogaaday in ay Taalibaan si dhameystiran gacanta ugu hayaan 14 degmo( oo ka dhigan 4% boqolkiiba masaaxada wadanka) sidoo kale waxay joogitaan dhameystiran ku leeyihiin 263 degmo (oo ka dhigan 66%) taasi oo si wax ku ool ah uga sarreysa qiyaasihii hore loo sameeysay.
Ku dhowaad 15 miliyan oo qofKala bar dadweynaha Afghanistan ayaa ku nool dhulka ay maamusho ama ay ka howlgasho Imarada Islaamiga ah ee Afghanistan (Taalibaan) .
Dhulka gacanta ugalay Taalibaanka laga soo bilaabo sanadki 2014-kii waxa kamid ah gobolka Helmand degmooyinkiisa sida Sangin, Musa Qala iyo Nade Ali halkaasi oo ay ka dirireen laguna dilay ciidamada shisheeye si ay u hooskeenan dowlada daba dhilifka ah ee Kabuul kadib markii Isbaheysigiii mareykanku hor kacayay ay ku soo duuleen Afghanistan 2001. Ku dhowaad 500 askari oo Biritish ayay BBC-du sheegtay in lagu dilay gobolka Helmand intii u dhexeysay 2001 ilaa 2014-kii.
Meelaha lagu sheegay warbixinta in Taalibaan ay ka howlgasho waxay ka fulisa weeraro isku xig xiga oo ey ku qaaddo saldhigyada maleeshiyaadka xukuumadda Kabuul, Weeraradas waxay kala yihiin weeraro qorsheysan oo cagta lagu mariyo xeerooyinka ciidamada, kuwa lagu beegsado baro cayiman, kuwa dhabbagal ah oo lagu beegsado kolonyooyinka ciidamada iyo kuwa xoog kugal ah oo ka dhan ah kontroollada police-ka.
Weeraradii la diiwaan galiyay intii ey cilmibaaristu socotay waxay kala yihiin heerarka soo noq noqshadooda Isbuucii laba mar meelaha ey Taalibaanku aad u joogaan iyo Sadexdii bilood mar meelaha eeysan si xoogan u joogin.
Cilmibaaristaan degmooyinka ey dowladu sida dhameystiran u xukunto waa kuwa leh maamul ku metala dowladda dhexe sida guddoomiye degmo, Taliye police iyo Maxkamado.
Intii lagu guda jiray cilmibaarista, BBC-da waxay soo ogaatay in 122 (%30 wadanka) eysan Taalibaanku kulahayn joogitaan muuqda. Meelahaas waa meelaha lagu tiriyo iney dowladu maamusho. laakiin taas macneheeda ma ahan iney ka madax banaanyihiin weeraro kaga yimaada dagaalyahanada Imaarada.
Kaabul iyo magaalooyinka kale ee waaweyn, tusaale ahan waxay la ildaranyihiin weerarada waaweyn ka hor iyo kadib warbixintaan.
Waa intee dhibaatada ka soo gaarta Dadka dagaalka Afghanistan.?
Amrudiin oo ah maamulaha sharikad gadiid oo maxali ah waxa uu daganyahay iridka looga baxo degmada Baharak ee woqooyiga gobolka Badakhshan Halkaas oo ey BBC-du ku sheegtay iney Taalibaanku joogitaan heer dhexe ku leeyihiin.
” waxaan ku noolnahay cabsi joogta ah, markasto oo dowladdu biloowdo howlgalka ka dhanka ah Taaliban, Inaga aya ku waxyeeloowna iyadoo islamarkaasna ey wax walbaa joogsadaan. Haa waa ay yara dagantahay lakiin daalibaanku wali waa joogaan.” ayuu yiri
Mohamed Raza, waa Aabe sideed carruura ah leh oo ku nool Magaalada sangin oo ay gacanta Ku heyso Imarada Islaamiga ah waxa ku tilmaamay noloshu iney wanaagsantahay ku hoos nolaanshaha Taaliban ayna Nabad heystaan aad ayuu u amaanay maamullada islaamiga ah ee Taliban ay ka dhistay gobolka Helmand.
” Kaliya xaaladu waxay Xumaata markii ciidamada Dowladu yimadaan oo ay dhibaateeyaan ammaanka iyo kala dambeynta” ayuu yiri Mohamed Raza.
Galbeedka caasimadda, Jamiila oo ah hooyada 5 caruur ah waxay sheegtay ” Laba madfac oo eey Taalibaanku soo tureen ayaa ku dhacay dhabarka danbe ee beeteena bishii lasoo dhaafay. Waxan degenahay meel dhowr tilaabo u jirta xafiiska Gudoomiyaha degmada. Halkaani nabadgalyo ma ahan”.
Intii ay cilmibaaristu socotay caddeeymaha dhaqaalaha ey Taalibaan dadka ka aruuriyaan ayaa daaha laga qaaday” Magaalooyinka eey sida caadiga ah u joogaan waxay beeraleyda iyo ganacsatada ka qaadaan dhaqaalo.
Xogta baaritanka ay sameysay BBC-du waa isha mariyay machad Shabakad falanqeysa Arrimaha Afghanistan taasi oo isha ku haysay illaa 2009-kii.
Agaasime Kate Clark waxa uu yiri ” Baaritaan sidaan u fiican ee lagu sameeyay dagaalka Afghanistan waa dhif waana mid la bogaadiyo, waxa lasoo ogaaday waa wax laga noxo lakiin nasiibxumo layaab maleh, waxay runta u cadeeyeen sida saxda ah ee dagaalka”.
Waa kuma Taalibaanku?
*Waa Jamaaco islaami ah oo dalka qabsatay 1996 kuna dhawaaqday Imaarad islaami ah kadib dagaalkii sokeeye ee daba socday Dagaalkii Afghan looga saaray midowgi Soviet. Kadibna uu Taxaaluf uu maraykanku hogaaminayay kusoo duulay kana qabsaday qeybo kamid ah wadanka Shansano kadib markii ey wadanka qabsadeen.
*Waxay dalka kusoo rogeen ku dhaqanka Shareecada Raxmaanka, sida fulinta xuduudaha kala duwan iyo xijaabka dumarka.
*Raggu waa iney garka deystaan, Dumarkuna waa iney qaataan dhar dhamaantood wada daboolaya, Heesaha, Television-da ,shaneemoyinka iyo Muusiga waa mamnuuc.
*Waxay magangalyo siyeen hogaanka Al-qacida ka hor iyo kadib markii lasoo weeraray, waxayna kala soo horjeesteen shisheeyaha dagaal dhiig badan ku daatay oo ila hada socda.
Sameyn inte la eg ayay dagaaladu ku yeesheen caasimadaha.?
Dagaaladu way kasoo darayeen tan iyo markii ey ciidamada shisheeye ka bexeen wadanka, sadex sano ka hor, In ka badan 8,500 qof ayaa la dilay sadaxdii rubac ee ugu horeysay 2017-kii. Qaramada midoobayna wixii ugu danbeeyay aya laga sugayaa. Dhibaatada ugu weyn waxay gaaraysaa kooxaha iska soo horjeeda lakiin shacabkuna waxbaa soo gaaraya dagaaladda cirka iyo dhulka ee dhexmaraya mareykanka iyo Imaarada.
Inkastoo dhibaatooyin waaweyn aan mararka qaar lasoo tabinin, weerarada waa weyn ee ka dhaca magaalooyinka waxay qabsadaan Qodobada wararka ugu waaweyn. Weeraradaas si weeyn ayay usoo laa laabtaan, ciidamada dowladuna waxba kama qaban karaan.
10 kii maalmood ee ugu danbeysay Bisha January, 3 weerar ayaa caasimada gamaariyay iyadoo ay in kabadan 130 qof ku dhinteen weeraradaas. May-dii lasoo dhaafay Kaabul waxaa soo maray weerarka kali ah ee ugu dhimashada badnaa tan iyo 2001-dii.
Ugu yaraan 150 qof ayaa lagu dilay in kabadan 300-na way ku dhawacmeen weerar loo adeegsaday Gaari xamuul ah oo ka dhacay meel lagu tilmaamo in ay tahay halka ugu ammaanka fiican ee caasimadda, Majirto cid sheegatay weerarkaas iney ka dambeyeen.
Waxaa Tarjumay Hilaal Colaad